Daawo Sawiradda : NBB waxa uu Shacabka Baydhabo Janaay u dhisay Dugsigii 8-aad ee lagu Barto Qur’aanka kariimka. – idalenews.com
Naadiga Bayazaniyiinta Baydhabo waxaa la aas aasay 25kii Oktobar 2013 waxaana aas aasay oo masaxdiisa ka soo maaxatey mahadi haka gaarte Dr.Aweys Cabdi Jidle .
Naadiga oo magaciisa loo soo gaabiyo NBB,wuxuuna leeyahay Forum NBB oo ay ku mideysan yihiin dhamaan intii ku dhalatey Baydhabo ku barbaareen iyo waxna ku barteen.
Hadaba Forumka NBB ujeedoyinkiisa waa walaalo isu bahaystey Beledkii Ilaahay dhamaantooda xuduntooda ku aasey iney Abaalkiisa u gudaan ugana gudaan waxkastoo ay u qabankaraan oo ay ugu horeyso Caafimaadka iyo Waxbarasho
Hadaba Walaalaha NBB eek u walaalowey Ilaah dartii iyo kalgacayla ay u hayaan Baydhabo Janaay ayaa waxay wax ka qabteen arimo dhowr ah oo indho qabad leh sida :
Waxaa ay dhiseen oo awooda ugu badan 90% Dugsiyada diinta Alle lagu barto waxaa intaasi dheer Beel weynta Eeylo ee Baydhabo degan waxaa ay u dhiseen sedax dugsi waxaa kaloo ay u qabteen Afar Maclin Dugsi Quraan oo bil walba uu Naadiga $400 (afarboqol dollar ) Macalinkiiba Boqol doolar ay siiyaan .
Sidoo kale Dugsiyada ay u dhiseen iyo guryaha ay ku nool yihiin waxaa wanaagsan Dugsiyada sida aad sawirada ama Clipska la socdo ka aqrisan kartaan.
Hadaba ardada 8 Dugsi quraan wax ku barata oo ku dhowaad kun ay yihiin iyo walidiintooda ayaa Habeen iyo Maalin u soo duceynayaan walaalaha wanaaga u kacay kana fogaadey xumaha iney ku walaalowaan .
Waxaan mahad gaar ah u jeedineynaa Xubnaha ay ka mid yihiin Amb.Maxamed Mursal,Dr.Aweys Cabdi Jidle, Drs.Amina Maxamed Nuur,Malyuun Maxamed Adan,Fadumo Xasan Qasdi,Maxamed Axmed Mursal,Shankaroon Xasan Birkaan,Xaliimo Maxamed Nuur iyo dhamaan walaalaheeda iyo guud ahaan intii waxtar ka geystay Hormarinta Diinta Alle iyo inta Hada wax ka qaban doonto.
Waxaan qoraalka ku soo koobaya sidii uu inoo sheegey Nabiyulaahi Muxamed (DADKA WAXAA U QAYRBADAN MIDKA WAXBARTA IYO KAN WAXBARA)hadaba walaalayaal ka waran Qofkii midka waxbarta meel uu ku barto u dhisey Barahana Mushharad u qorey Ajarkiisa shaki kuma jiro Ilaahay ayaa qiimeyntiisa og, ILAAHAYNA MADAYACO MUXSINIINTA WANAAGA AY QABTAAN.
Dugsiga xaafada Malaaq Mad Sabarow.
Dugsiga xaafada Buulo Aw Deerow